Cloudy Bay Chardonnay 2017 ~ ICT.com.mm
HomeCloudy Bay Chardonnay 2017
Cloudy Bay Chardonnay Alcohol: 13.5% Dry/ 2016 Marlbororgh/ New Zealand Tasting Note Appealing and expressive on the nose which reveals layers of ripe fruits and gentle notes of roasted hazelnut. The palate... [Learn more]
Brand: Cloudy BayFilter by: FWM, Wine
Appealing and expressive on the nose which reveals layers of ripe fruits and gentle notes of roasted hazelnut. The palate showsavibrant freshness, perfectly balancing hints of nectarine and green fruits accompany byalong finish.
Marlborough Chardonnay will be paired perfectly with srtong flavor fish such as salmon or tuna, Sushi, Sashimi, chicken or pork with light flavor mushroom sauces and soft cheeses.
နယူးဇီလန်နိုင်ငံထုတ် Cloudy Bay အမှတ်တံဆိပ် Chardonnay 2017 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရာ Marlborough ဒေသရှိ ဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ် ကမ္ဘာကျော်အဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ်သီးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးဝိုင်အမျိုးအစားစာရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး Alcohol ပါဝင်မှုပမာဏ 13.5% ရှိတဲ့ Dry/ 2016 ဝိုင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရသာကဲတဲ့ ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ ဆူရှီ၊ ဆာရှီမီ၊ မှိုဆော့စ်နဲ့စားသုံးရတဲ့ ကြက်/ဝက်သား ဟင်းလျာ၊ ချိစ်စသည့် အစားအသောက်တွေအားလုံးနဲ့ တွဲဖက်ဖို့သင့်တော်တဲ့ နယူးဇီလန် ဝိုင်ဖြူဖြစ်ပါတယ်။